Gazety boky Jeune Afrique : «Misy fandraisana djihadista mpampihorohoro eto» | NewsMada
Gazety boky Jeune Afrique : «Misy fandraisana djihadista mpampihorohoro eto»
Mampanahy mafy. « Ahina ny hahatongavan’ireo mpampihorohoro avy amin’ny Daesh amin’ny alalan’ny taratsy hosoka hidirany eto, miainga avy any Istanbul ary tena mety hitombina izany. Araka ny loharanom-baovao hafa koa, miditra any avaratra andrefan’ny Nosy amin’ny alalan’ny sambo avy any Kaomoro izy ireo, manararaotra ny tsy fisian’ny fanaraha-maso sy fanamarinana atao », hoy ny gazety boky Jeune Afrique, nivoaka ny 4 jolay teo. Nohitsin’ity gazety boky ity mihitsy fa misy tambajotra, ahitana depiote sy mpandraharaha vahiny ary teratany kaomorianina mandray anarana handraisana ireo te ho mpanao ady masina « jihadistes ».
Hiditra an-tsehatra ny GIGN Frantsay
Tsiahivina fa efa nanambara ny fahavononany amin’ny hidirany an-tsehatra avy hatrany ny komando frantsay eo anivon’ny GIGN raha miseho izany hetsika na asa fampihorohoroana izany eto amintsika. « Efa famantarana sahady ny hampitombina ny hahatongavan’ny fanjakana islamika na ny Daesh ny fanorenana ireo fiangonana na « mosquées » marobe eto Madagasikara ka hampahazo vahana izany fisian’ny silamo mahery fihetsika izany », hoy ny tompon’andraikitra vahiny iray.
Nomarihin’ity gazety boky iray ity koa fa tsy voaantoky ny fanjakana malagasy ny fitandroana ny filaminana sy ny fandriampahalemana, manoloana ireny tranga niseho tetsy Mahamasina sy tany Beroroha ireny.